XUSUUSTII CAMP NOU: Halyeygii Reer Brazil Ee Ronaldo Oo Sabtida Ku Laabanaya Barcelona Iyo Sababta Uu U Tegi Doono - GOOL24.NET
XUSUUSTII CAMP NOU: Halyeygii Reer Brazil Ee Ronaldo Oo Sabtida Ku Laabanaya Barcelona Iyo Sababta Uu U Tegi Doono
Garoonka kooxda Real Madrid ee Estadio Santiago Bernabeu, garoonka Valencia ee Mestalla iyo Ciutat de Valencia, waa saddexda garoon ee uu halyeygii reer Brazil ee Ronaldo booqday xili ciyaareedkan, waxaana uu toddobaadkan dib usoo celin doonaa xusuustii uu ku lahaa garoonka Camp Nou ee Barcelona oo uu Sabtida booqan doono.
Dhamaan saddexda garoon ee hore ee uu tegay, Ronaldo muu doonaynin in kooxaha iska leh ay guul helaan, waxaanu dhamaantood la doonayey inay khasaaraan maalintaaas uu goob-jooga u ahaa, sidaas oo kale ayaa marka uu Camp Nou taago Sabtida, waxa uu khasaare la doonayaa Barcelona oo beryaha qaar ahaan jirtay naadiga uu ku dhaato ee uu guusha u raadiyo isaga oo xidhan funaanaddeeda.
Ronaldo ayaa xilliyadii uu u ciyaari jiray Barcelona, waxa uu u dhaliyey 34 gool 47 kulan oo kaliya gudahood ka hor intii aanu uga wareegin Inter Milan oo uu haddana usii dhaafay Real Madrid illaa uu ka degay AC Milan.
Halyeygan oo xulka qaranka Brazil u qaaday Koobkii Adduunka ee 2002, sidoo kalena keenay finalka Koobkii Adduunka ee 1998, ayaa waxa uu dhawaan iibsatay saamiga ugu badan ee kooxda Valladolid, waana saami ka badan kala badh oo si sida sharcigu dhigayo lagu tilmaami karayo inuu yahay mulkiilaha kooxda.
Waxa uu ka qayb-geli doonaa ciyaarta ay kooxdiisu Sabtida martida ugu noqonayso Barcelona, inkasta oo aan si buuxda loo xaqiijinin, waxaanu garab fadhiisan doonaa Josep Maria Bartomeu.
Haddii kooxdiisu ay khasaare gaadhsiiso Barcelona, waxay ka dhignaan doontaa in Ronaldo iyo kooxdiisu ay asxaan u sameeyeen Real Madrid oo lix dhibcood ka dambaysa, isla markaana Axadda la ciyaari doonta Girona.